SharePoint 2016 ဗိသုကာ: developer များအသစ်ကဘာလဲ? - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
20 မာ 2017
Sharepoint 2016 အတွက်နယူးကဘာလဲ
Enhanced စွမ်းဆောင်ရည် - ပိုမိုထိရောက်သော
နားလည်ရန်လွယ်ကူသော - ရိုးရှင်းတဲ့
တိုးတက်လုံခြုံရေး - ပါစိတ်ချရသော
Sharepoint Microsoft က Office ကိုအတူထည့်သွင်းထားတဲ့အီလက်ထရောနစ် application ဖြစ်ပါတယ်။ 2001 အတွက် propelled, Sharepoint မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ရောင်းစားနေသည်, သို့သော်ပစ္စည်းအလွန်အား Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုများအကြားရက်ရက်ရောရောခြားနားနေသည်။ ဒါဟာပြောင်းလဲနေသောနှင့်ရှယ်ယာစာအိတ်ထဲမှာစာရွက်စာတမ်းများ recover တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်အလုပ်ဖြစ်စဉ်များအဆောက်အအုံရင်ပြင်ပေးနဲ့လျှောက်လွှာတိုးတက်မှုအခါသမယအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအဆင့်မြှင့်အားဖြင့် SharePoint data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကိုတစ်ဦးသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး element တွေကိုဒေတာဘေ့စ cache နဲ့ content တွေကို-အောက်မေ့ switching စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါတယ်။ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအချက်အလက်များ၏ဘဝသံသရာထိန်းညှိဖို့ချဉ်းကပ် Out-of-box ကိုဒါဟာ ပေး. စီရင်။
ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိသည်သော Sharepoint ၏ကွဲပြားခြားနားဗားရှင်းရှိပါတယ်:
Sharepoint အွန်လိုင်းတစ်လသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အသင်းဝင်ဖို့ Microsoft က Office ကို 365 လအတွက်ထုပ်ပိုးအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်, သေးထွက်ရရှိသောထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာညှိနှိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အလယ်ဗဟိုအစီအစဉ်, hosting ဖိုင်နှင့်စာရွက်စာတမ်းနဲ့ content စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေများမှကန့်သတ်ခြင်း, တသမတ်တည်းလန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်အသင်းအဖွဲ့များ SharePoint ကောက်အဘယ်ကြောင့်4ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ရုံး 365 နှင့်အတူချမ်းသာပြောင်းလဲနေသောပေါင်းစည်းမှု
မိုက်ကရိုဆော့ဖ SharePoint ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အပြင်းအထန်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်
Of-The-ကွန်တိန်နာ-out Bonzai Intranet တူသော Solutions ရုံသင့်ရဲ့ SharePoint Intranet တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
Sharepoint 2016 တစ်ဦးစွယ်စုံပထမဦးဆုံးနဲ့ cloud ပထမဦးဆုံးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းအားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုယူပြီးသောအရာနှစ်ခုနှင့်အတူနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Sharepoint အတွက် element တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဆိုပါသိသာသောသူတို့၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုအောက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။
index ကော်လံပရိုဂရမ်ချမှတ်ခြင်း။ ဒါဟာပမာဏဖယ်ရှားပေးနှင့်မလုံလောက်မှု, ပု 5000 အမြင်အစွန်းနှင့်အတူယွင်းဘော်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖောက်ရှာရန်မော်ဒယ်ရာပူဇော်သက္ကာ Sharepoint အွန်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးထံမှရည်ညွှန်းစာရင်းနဲ့ content slithering စညျးမြားနှငျ့တွင်-နိဒါနျးပိုငျး
ပုန်းကွယ်ခံရဖို့ဖိုင်အရွယ်အစား၏ cutoff ပိုရောက်သတ်မှတ်ထားသော 2GB ထံမှ 10GB မှတက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာဒေတာဘေ့စများ၏မြေယာ bytes ယင်း၏ 2016 တစ်အုပ်ဖြစ်အတွက်ကျားကန်နေကြသည်။
Sharepoint 2016 နှင့်အတူ Packs- Customer များ Feature ကို Pack ကိုခေါ်အချက်အလက်များပြန်လည်လန်းဆန်းစေမြင်ရပါလိမ့်မည် Include နောက်ကျောတွင်-ဥပစာမှရုံး 365 အပေါ် Sharepoint အဘို့အလိုပြည့်စုံသည့် updates ကိုရောက်စေဖို့သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်လာကြ၏။
ဒီ software ၏ 2016 မူကွဲပေးပို့ခြင်း streamlines ပေးသောအခြားဒြပ်စင်, MinRole, တင်ဆက်ခဲ့ပြီးသေဒဏ်စီရင်ခြင်းနှင့်ယိမ်းယိုင်အရည်အသွေးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်လယ်ယာဘက်စုံသုံးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ MinRole ရဲ့တစ်ပြင်ဆင်ချက်ကြိုးစားနေအဖြစ်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးရရှိသွားတဲ့နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းခက်ခဲ coded ခံရဖို့ထွက်လှည့်, ကသဘာဝကျကျအတိတ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထက်ပိုလာဘ်၏ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအငွေပမာဏဖြစ်ထွက်လှည့်။
MinRole မီးမောင်းထိုးပြ။ Sharepoint ဆာဗာ 2016 ၌ဤစက်ပစ္စည်းအသစ်အသုံးချဖို့အသုံးပြုပုံ Sharepoint လယ်ယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်လယ်ယာ topology အတွင်းမှတစ်ဦးချင်းစီဆာဗာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသွင်ပြင်လက္ခဏာများနိုင်ပါတယ်
SharePoint 2016 လုံးဝရုံး 365 တစ်ဦးထံမှချွတ်စွပ်အရွယ်အစား codebase အပေါ်အခြေခံသည်။ အများဆုံး, မှန်မှန်အစိုင်အခဲများနှင့်ပတ်လည်ယခုယခင်ကသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ထားပြီးဖြစ်သော Microsoft သည်ကို item ကြိုးစားခဲ့ကြောင့်စဉ်းစားသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖအဆိုအရအတူတူ codebase SharePoint မဆိုအနာဂတ်တစ်အုပ်ဖြစ်ဘို့အသုံးပြုသွားမည်ခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။
လတ်တလော Sharepoint မူကွဲတစ်ခု Touch-လက်ခံပေးနိုင်ရန် interface ကိုအတူ။ ဤသည်ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကျော်ပါကအသုံးချဖို့၏အတွေ့အကြုံပိုကောင်းစေပါတယ်။
အဆိုပါ UI ကိုတိုးမြှင့်မှုများနှင့်လျှောက်လွှာ launcher နှင့်သမျှသောကပိုရိုးရှင်းပြီး SharePoint 2016 သို့မဟုတ်ရုံး 365 ဖြစ်စေရှာဖွေစူးစမ်းစေပါလိမ့်မယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Flow- အဆိုပါ Sharepoint Workflows အဖြစ်အသက်ရှင်သေးခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲရှိပါတယ်။ ယနေ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မှန်မှန်တစ်တန် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤပျက်ပြယ်ဖို့ပဲ SharePoint နှင့်အသစ်သော Flow ထက်ပိုပြီးယူပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးအဘို့အ SharePoint 2016 ရဲ့ Hybrid ကို OneDrive အဆိုပါဘက်စုံမှထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာမိုဃ်းတိမ်အုပ်ချုပ်ရေးမှတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လမ်းရိုးရှင်းစေသည်။ လတ်တလော Sharepoint နှင့်အတူ, client များစီးပွားရေးအဘို့အ Sharepoint အွန်လိုင်း OneDrive ၎င်းတို့၏ On-ဝုဏ်အကြှနျုပျ၏ဆိုဒ်များ / OneDrive အိမ်ရှင်လွှဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့အဆိုဧရိယာကနေသူတို့ရဲ့ဖိုင်တွေအသုံးချနိုင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါပေးမည်။
Group မှ Sites- SharePoint အဖွဲ့ဆိုဒ်များတစ်ဦးရဲ့ Refresh လာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုနည်းတူသဘာဝကျကျတစ်စေမည် Office ကို 365 Group မှ။ အခြားလမ်းတစ်ရုံး Group မှအောင်စဉ်ကယခုသင်တစ်ဦးအပြည့်အဝ, ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာအဖွဲ့ဆိုက်ကိုပေးလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဒါ့အပြင်ကြီးလှ၏။
လက်ရှိတွင် client ကိုထိုနည်းတူတစ်ခုတည်းကို tick နှင့်အတူတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းစာကြည့်တိုက်ပေါ်သူတို့ကိုပို့စ်တင်နေဖြင့်ပုံနဲ့အသံသွင်း၏မြင်စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။
အဲဒီအစားရိုးရှင်းစွာပုံတူထက်, လတ်တလော Microsoft က Sharepoint client များသည်ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏စွန့် SharePoint မှ OneDrive ထံမှစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ် data ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးသွယ်ဝိုက်နဲ့ cloud ဆက်စပ်တသမတ်တည်းနှင့်အတူအဆုံး-client ကိုများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သည်လုံခြုံရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာစီးပွားရေးအဘို့အ OneDrive နှင့်အတူ Sharepoint စာကြည့်တိုက်ပေါ်ဒေတာရှာဖွေနေခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအားဖြင့်ဒေတာများလုံခြုံရန်ပြန်ကြားရေးငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု (IRM) စွမ်းရည်အတူ။
SSL ကို 3.0 မှာတော့လုံခြုံရေးအကူအညီမဲ့သတင်းအချက်အလက်များ unscramble တစ်ဦးပရိုဂရမ်မာခွင့်ရသောတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တန်ပြန်ဖို့အချို့သောလတ်တလော Sharepoint ပျေါလှငျယခုလူသိများကိစ္စများနှင့်အတူသင်တန်းကိစ္စအဖြစ် SSL ကို 3.0 အသင်းအဖွဲ့ encryption ကို, နှင့် (ဥပမာအားဖြင့် RC4 များအတွက်) အချို့သော encryption ကိုတွက်ချက်မှုပိတ်ထား။
အဆိုပါ SharePoint 2016 ထောင့်လှည့်လည်ဘယ်တုန်းကမှစွန်နှင့်အတူ, ဒီအလွန်အမင်းမျှော်လင့်မူကွဲ၏ခက်ခဲတဲ့နှင့်သရုပ်ြပ On-ဝုဏ်အတွင်းစွမ်းရည် doubtlessly ရှေ့ဆက်သူတို့ရဲ့နောက်တစ်နေ့အကြောင်းအရာနေရာပြောင်းရွှေ့စီစဉ်ဖို့အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အများစုမပြည့်စုံကြပြီ။
ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ Solutions များကသင်တန်း
ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းပြင်ဆင်နေအိုင်တီကားမောင်း, ပါရမီကျွမ်းကျင်သူများကများအတွက်အကျိုးစီးပွား ရှိ. ယင်း ကြီးထွားလာ software ကို draftsmen များအတွက် Sharepoint လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းကွံသိရသည်။ ဒါဟာပြည့်စုံစေ့စပ်သင်တန်းဆော့ဖ်ဝဲအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ခွဲ Sharepoint စစ်မှန်သောကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ကူညီပေးပါမည်။
တွင်-ဥပစာ SharePoint အွန်လိုင်း Vs SharePoint